समाचार Archives - Janata Ko Aawaj
डा. चिन्तामणी योगीको प्रवचनबाट प्राप्ति गरिएका केही सन्देश: चन्द्र कान्त पण्डित. काठमाडौको चाबहिल स्थित पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयमा केही नयॉ कुराहरु पस्कदै विद्यलायमा दिलाइने शिक्षालाई परिस्कृत गर्ने सम्बन्धमा २०७९।०३।०५ गतेका दिन डा. चिन्तामणी योगीलाई बोलाई उहॉको मुखारविन्दुबाट शिक्षक तथा केही प्रतिनिधि विद्यार्थी , विद्यालय व्यव्स्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र केही नजिकैका छिमेकी विद्या...
यस वसन्तको दिनमा सुन्दरता आँखालाई ताजा बनाउँछ, रङहरू घुम्छ। फूलहरू हरियो रंगका घरहरू। तिनीहरू हुर्किन्छन् र आफ्नो चमक राख्छन्। हाम्रो आँखालाई छोप्ने रंगहरू आकाशको नीलो र खैरो कन्ट्रास्ट गर्नुहोस्। उज्ज्वल रातो र पहेंलो-सुन्तला सुगन्धित फूलहरू विदेशी होइनन्! आजको दिन सुरु भएपछि म सोच्दैछु भित्र प्राप्त भएको सन्देश। के म भगवानको प्रेम सुन्छु? मलाई लाग्छ कि मैले उहाँको एन्ज...
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर ७ र ११ लाई जोड्न ह्युमपाइप राखेर बनाइएको अस्थायी पुलमा क्षति पुर्याएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रकाश सापकोटाका अनुसार फड्केश्वरी भन्ने स्थानमा ह्युमपाइप राखेर बनाइएको स्थानमा बाढीले क्षति पुर्याएको हो । अहिले त्यहाँ डोजर प्रयोग गरेर मर्मत गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । मर्मतको काममा मेय...
बिराटनगर । मोरगं जिल्लाको बिराटनगरमा श्री नेपाल हेभ्भी ड्राइभिंग स्कुल संचालनमा आएको छ । सोमबार शुभारम्भ कार्यक्रमको आयोजना गरी संचालनमा आएको हो । बिराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ ढाटमा संचलनमा आएको सो ड्राइभिंग स्कुल झन्डै १ करोड ४० लाखको लागतमा संचालनमा आएको हो । १ बिगहा १४ कठ्ठा क्षेत्रफल रहेको सो ड्राइभिंग स्कुल नेपालकै सबै भन्दा ठुलो भएको संचालक शिव श्रेष्ठले बताए । संचालनमा आएको ड...
मुकेश उखेडाको शब्द तथा संगीतमा नयाँ गीत ’सानी’ बजारमा
काठमाण्डौं । पप गायक मुकेश उखेडाको नयाँ गीत ’सानी’ को भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । टेरेन्स साउद अफिसियल युट्युब च्यानलबाट बजारमा आएको भिडियोमा गायक स्यमको शब्द तथा संगीत रहेको छ । प्रेम र रोमान्सलाई कलात्मक शैलीमा देखाइएको भिडियोमा टेरेन्स राउद र सुस्मिता कुवँर ले अनस्क्रिन रोमान्स गरेका छन् । छायांकन पि आर जोशीले गरेका हुन् भने सम्पादन उनले नै गरेका हुन् । भिडियोको निर्देशन प्रविण सिंहंले गरेका...
तीर्थराज अधिकारीको शब्दमा राज सिक्देलको आवाजमा ‘पहिलो चोटी‘
काठमाण्डौं बरिष्ठ साहित्यकार तीर्थराज अधिकारीको रचना तथा सुगम संगीतको लोकप्रिय गायक राज सिग्देलको आवाजमा रहेको गजल ‘पहिलो चोटी‘को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सुगम संगीतका चर्चित र अब्बल संगीतकार राजेश थापाको संगीत रहेको सो गजलमा दिक्षित पौडेलले संगीत संयोजन गरेका छन भने चन्द्र चौधरीले मिक्सिङ तथा मास्ट्ररिङ गरेका हुन । गजलको एक सुन्दर भिडियो पन ीबनेको छ । जसको निर्देशन अनुप चापागाईँले गरेका हुन ।...
पेजलाई follow गरि नया Update लिनुहाेला !